नेपाल आज | सहरका गल्ली गल्लीमा आफ्नै गीत बजेको सुन्दा रमाइलो लाग्थ्याे
कला साहित्य मेरो परिवार मेरो कथा
सहरका गल्ली गल्लीमा आफ्नै गीत बजेको सुन्दा रमाइलो लाग्थ्याे
आइतबार, ०९ असोज २०७३ गते प्रकाशित
आफैँले गाएको गीत एफएममा बज्न थाले । पसल, चौक गल्लीमा आफ्नै आवाज घन्किन थाल्यो । सडकमा, टेम्पो, माइक्रोमा पनि आफ्नो गीत बज्न थालेपछि मन खुसी हुन्थ्यो । गीत रमाइलो मानेर स्रोताले सुनिरहेका हुन्थे । त्यही छेउबाट हिँडिरहेको गायकलाई भने स्रोताले चिन्दैन थिए । ‘माया लाउन त’ बोलको गीत चर्चित हुँदा गायक भरत सिटौला यस्तै अनुभव गर्थे । धेरै स्रोतले गीत चिने तर गायक चिनेका थिएनन् ।
आफ्नो गीत हिट हुनु, जताततै गीत चल्न थाल्दा ‘यो के भइरहेको छ ? जस्तो हुन्थ्यो ।’ शुरुवाती सफलता स्मरण गर्दै लजालु गायक भरत सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि मलाई एफएमहरुले अन्तर्वाताका लागि बोलाउन थाले । पत्रपत्रिकामा पनि मेरो अन्तर्वार्ता, कुराकानी, सामग्रीहरु छापिन थाले । साच्चै गायक भएँ कि भन्ने लाग्न थाल्यो ।’ ‘माया लाउन त’, पछि ‘अचानक आज तिमीलाई’ बोलको भरतको गीतले युवा वर्गको ढुकढुकी बढायो ।
गीत मेलोडी त छँदै थियो, त्यसको गायन शैली पनि स्रोतलाई अरु भन्दा फरक लाग्यो । चकलेटी अनुहारका हेन्डसम गायकका रुपमा भरतलाई धेरैले चिन्छन् । तर उनको यो अनुहार आम दर्शक, स्रोतामाझ स्थापित हुन अचानक बोलको गीत नै कारक तत्व बन्यो । अचानक बोलको गीत बजारमा आउँदासम्म एल्बम निकाल्न गायकले नै लगानी गर्नुपर्ने, लगानी नउठ्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो । यसो भन्दैमा भरत संगीतको नशाबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
हुरुक्कै हुने केटी फ्यानहरु धेरै थिए । हात काटेर ‘भरत’ लेख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । पटक पटक फोन गर्नेहरुका कारण कहिलेकाहीँ तनाव नै हुन्थ्यो । त्यो क्रेज सम्झदै सिटौला भन्छन्, ‘त्यस्तो समय सधै रहिरहने रहेनछ । एकपटक आउँदो रहेछ ।’ सांगीतिक कार्यक्रममा जिल्ला जिल्ला पुगेका छन् भरत । कार्यक्रममै धेरै युवतीहरुसँग क्रस परेको उनी बताउँछन् । त्यो क्रसले कतिसम्म लिमिट क्रस गर्यो त ? उनी भन्छन्, ‘क्रसले लिमिट क्रस गर्न पाएन । क्रसमै सिमित भइयो ।’ सांगीतिक कार्यक्रमबाहेक पनि महिला साथी धेरै भए उनका । भरतले नढाँटी भने, ‘बिहे अघि अफेयर त धेरै चल्यो । अहिले विशुद्ध पति धर्म निर्वाह गरेको छु ।’ यसमा ठट्टा थप्दै उनले भने, ‘ अब पनि अफेयर चल्यो भने त बुढीको कुचो खाइन्छ ।’
सबैले चिन्नुको बेफाइदा
गीत हिट हुँदा म्युजिक भिडियो पनि चल्छ । भरतको म्युजिक भिडियोमा उनी आफै अभिनय पनि गर्छन् । भिडियोमा जम्ने अनुहार प्रकृतिले नै उनलाई दिएको छ । भिडियो बजारमा आएपछि उनलाई बाटोमा मान्छेले चिन्न थाले । ‘धेरैले यो मान्छेलाई कता देखेको भन्दै घुरेरे हेर्थे । कोही कोही चिनेर कुरा गर्न आउन थाले ।’ उनले भने, ‘कुनै समय सडक गल्ली, सार्वजनिक यातायातमा विन्दास भएर हिँड्दा,घुम्दा फरक पर्दैन थियो । कसैले चिन्दैन थिए । एउटै भिडियोले जीवन शैलीमा अलिकति परिवर्तन गरिदियो ।’ त्यस्तै जीवन शैली अपनाउन समस्या हुन थाल्यो ।
कला, साहित्य र संगीतमा उनलाई बच्चैदेखि रुचि थियो । काठमाडौं आएपछि उनले रेडियोमा कविता वाचन गर्ने र नाटक खेल्ने पनि काम गरे । उनी गीत त पहिलादेखि नै गुनगुनाउने गर्दथे । तर गीत गाएर जीवन चलाउँछु भन्ने सोचेका थिएनन् । साथीभाईका माझमा रहेर उनी गीत गाउने गर्दथे । उनको स्वरले चकित भएका साथीहरु उनलाई झन् हौस्सयाउने गर्दथे ।
काठमाडौं आइसकेपछि वि.स २०५५ सालतिर एफएममा गीतहरु सुन्दा आफू पनि एल्बम निकाल्छु भन्ने सोच पलायो । स्नातक पढ्दै गरेका उनी एल्बम निकाल्ने प्रयासमा दिन रात भौतारिन थाले । छोरो यसरी भौतारिएर हिँडेको देख्दा बाबु आमालाई पनि चिन्ता लाग्थ्यो । उनी धेरै म्युजिक कम्पनी धाए लगभग सबैले उनको गीत रिजेक्ट गरिदिए । उनी फ्रस्ट्रेट भए । थकित पनि । जसोतसो एउटा गीत रेकर्ड गर्ने मौका पाए । उनले एउटा सामान्य महत्वकांक्षा बोकेर गीत रेकर्ड गराएका थिए । उनलाई लागेको थियो, –अरुले सुनोस नसुनोस्, साथीभाईले सुन्छन् । तर गीत त सबैले मन पराइदिए ।
संगीतबाट एकाएक हराएँ
चलेका, लोकप्रिय हुँदा हुँदै पनि करिब सात वर्ष भरत सिटौला संगीतबाट टाढा भए । हिमालय टेलिभिजनमा संगीतसम्बन्धी नै काम गर्थे, कार्यक्रम चलाउन थाले । टेलिभिजनको कामले उनलाई संगीतबाट केही टाढा पुर्यायो । सांगीतिक क्षेत्रबाट क्रमश हराउँदै जाँदा फ्यानहरु पनि घट्दै गए । कलाकारको क्रेज फूल जस्तो हुँदो रहेछ । फूलेको बेला सबैको आँखा पर्छ । ओइलाउन थालेपछि ती आँखा अरु फूलमा सर्छन् ।
ओ रिया, माया लाउन त, अचानक आज तिमीलाई, हरे राम जस्ता हिट गीत दिइसकेका भरत सिटौला करिब ७ वर्ष पछि संगीतमा पूनरागमन गरेका छन् । ‘वैंशमा मै पनि घोर्ले’ बोलको गीतबाट उनले संगीतमा ‘कमब्याक’ गरे । ‘वैंशमा’ निकै चलेको छ अहिले । भरत आफैले लेखे, आफैले संगीत भरे, आफैले गाए र भिडियोमा पनि आफैले अभिनय गरे ।
शब्द, संगीत, स्वर र अभिनय एउटै व्यक्तिको हुनु र त्यो अरुले मन पराउनुले भरतको ‘ट्यालेन्ट’ स्पष्ट हुन्छ । बैंसमाको सफलतापछि उनको अर्को गीत तयार भएको छ । गीतको भिडियो सुटिङमा उनी व्यस्त छन् । भरतको नयाँ भिडियोमा ‘कार्टुन क्रुयू’ पल शाह नामका नयाँ फिल्मी कलाकार र भद्रगोल टेलिसिरियलकी कलाकार रक्षाले अभिनय गरिरहेका छन् ।
गायक सिटौलाको म्यूजिक भिडियो बजारमा ल्याउन अघि नापजोख गर्ने केही तौरतरिका छन् । उनी आफ्ना गीतहरु शुरुमा साथीभाईलाई सुनाउँछन् । सुन्नेहरुले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा गीतमा फेरबदल पनि गर्छन् । जब धेरैले मन पराउँछन् अनि त्यसलाई फाइनल गर्छन् । सिटौलाको सुटिङ भइरहेको गीत पनि आमश्रोताले मन पराउने अपेक्षा उनको छ ।
जीवनका सात वर्ष संगीतबाट टाढा बस्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । तर भयो त्यस्तै । त्यो सातवर्ष संगीतसँगै संगत गरेर सात वटा मात्रै भए पनि संगीगत सिर्जना गरेको भए कुरा बेग्लै हुने थियो । गर्नुपर्ने थियो संगीतको संगत भयो अरुसँगै । ‘कहिलेकाहिँ बेकारका मान्छेसँग पनि संगत गरिएछ जस्तो लाग्छ । अनावश्यक काममा समय खर्च गरे जस्तो पनि लाग्छ ।’ भरत भन्छन्, ‘मलाई जस्तोसुकै लागोस्, समय त अघि बढी नै हाल्छ । यसकारण ती कुरामा अल्मलिन्न अब । जसले जे गरोस्, त्यो उसको मतलवको विषय हो । म मेरो मतलवको काम गर्छु ।’
प्रियंका कार्की अहिलेकी हिट फिल्म हिरोइन हुन् । कुनै बेला म्युजिक भिडियोमा यीनलाई ब्रेक दिन भरत नै थिए । तर यो विषयलाई उनी कुनै महत्वका साथ उल्लेख गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘दूनियाँले प्रतिभाको कदर गर्छ । अनुहार र जिउडालको त्यसपछिका कुरा हुन् । प्रियंकामा प्रतिभा थियो । मैले ब्रेक नदिएको भए अरु कसैले दिन्थ्यो ।’
प्रस्तुतिः कञ्चन न्यौपाने
Bharat Sitaula Fyan Gayak Geet